Page-6 All Products - Hobby Carbon CNC Technology(Shenzhen) Limited
Home > Imveliso Bonisa
I-Al Preum yokujonga i-Aluminium Brass ye-Stainless Stainless
I-M3 Aluminium Standoff Anodised Round Colour Spacer
I-Amazon Ixabiso ngeNtsimbi engenasiseko
Ukomelela okuphezulu kwesinyithi sensimbi ye-hex nut
IAluminiyam yeAlloydange Flange etyiweyo yesiTshixo seZitshixo
Ixabiso elipheleleyo lokusika i-matill carbon fiber inxenye
Ixabiso eliphantsi le-CNC yokusika i-sheet sheet yefayibha
I-100% yeCarbon Fibre enokusikwa kwe-CNC
I-CNC Machining I-Aluminium Ikhampasi yekhamera
I-Vertical aluminium ye-aluminium ye-clamp ye-aluminium emiselweyo
I-Phillips yentsimbi engenasiseko
Isinyithi sensimbi engenasici
I-M3 anodized ejikeleze i-aluminium ekumeleni iHelikopta
I-Multicolor Anodised I-hex Aluminium Standoffs
Ukuphakama okuphezulu kweAluminiyam Anodizing ii-Knoffled Standoffs
Inqanaba Aluminium Anodised Hex Standoff
Ubunzima bokukhanya Ikhabhonibhuli yefibre kunye neTill Plain
I-ODM kunye ne-OEM 3K Carbon Fiber Square Tube
Intshukumo yesiko eligoqileyo le-anodized aluminium standoff spacer
Prepision isiko elineengcingo zombane ezinama-fasteners auto
Packaging: Ukupakisha iphepha
Amandla okubonelela: 2000pcs/week
Umjikelo we-Cylinder oyiCound Brass Standoff Spacer Yintoni iresiphi? Iipleyiti ezisetyenzisiweyo ngokubanzi ezisetyenziselwa ngezikrelem.it zinentambo kumacala omabini endlela, xa usikrola ephepheni, izinto ezintathu zinokwenza iphelele. Isetyenziswe ngokubanzi kubomi bethu bemihla ngemihla njengeenxalenye...
Min. Myalelo: 50 Bag/Bags
Ingcaciso yeMveliso I-Amazon Ixabiso ngeNtsimbi engenasiseko Intshayelelo yeMveliso Iinuts zesinyithi ezingenazitayile zineentlobo ezimbini zamanqatha okutshixa kwaye ucinezela amandongomane. Ukomelela okuphezulu kwetsimbi yentsimbi i-hex nut ihlala isenziwa ngombala. Ngaphandle kweNut Stainless yeNut , siphinda...
Ingcaciso yeMveliso Ukomelela okuphezulu kwesinyithi sensimbi ye-hex nut Intshayelelo yeMveliso Iinuts zesinyithi ezingenazitayile zineentlobo ezimbini zamanqatha okutshixa kwaye ucinezela amandongomane. Ukomelela okuphezulu kwetsimbi yentsimbi i-hex nut ihlala isenziwa ngombala. Ngaphandle kweNut Stainless yeNut ,...
Packaging: Iplastiki / ibhokisi
Min. Myalelo: 50 Carton
Ingcaciso yeMveliso IAluminiyam yeAlloydange Flange etyiweyo yesiTshixo seZitshixo Iialuminium zeAluminiyam zilungele izixhobo zedrone, ezenza ukuba i-drone ibonakale intle kakhulu. Ngama-nuts sinamantla amaninzi e-aluminium, Amantongomane eNtsimbi , i-hexagon yamandongomane kunye ne-nylon hexagon nut esitokhweni....
Min. Myalelo: 2000 Bag/Bags
Ingcaciso yeMveliso IColoful Self Lock Aluminium Hex Nut eneFlange Intshayelelo yeMveliso I-aluminium nati kunye ne-flange iya kuthatha indawo enhle yabenzi bezomsebenzi kunye nezokwakha, lolunye uhlobo lokuqina kwealuminium. Isetyenziswe ngokubanzi kwizixhobo zekhaya naseziofisini, izixhobo zonxibelelwano, indibano...
Min. Myalelo: 1 Piece/Pieces
Ingcaciso yeMveliso Ixabiso elipheleleyo lokusika i-matill carbon fiber inxenye Ukusika i-Carbon Fibre yeCarbon kuyindlela ekhethekileyo yokunceda abathengi bafumane isakhelo esikhethekileyo ukuvelisa i-drones yabo kwimarike. Senze intsebenziswano ezininzi kunye ne-brand eyaziwayo kwaye sifumana ngakumbi kunye...
Ingcaciso yeMveliso Ixabiso eliphantsi le-CNC yokusika i-sheet sheet yefayibha Ukusika i-Carbon Fibre yeCarbon kuyindlela ekhethekileyo yokunceda abathengi bafumane isakhelo esikhethekileyo ukuvelisa i-drones yabo kwimarike. Senze intsebenziswano ezininzi kunye ne-brand eyaziwayo kwaye sifumana ngakumbi kunye nengxelo...
Ingcaciso yeMveliso I-100% yeCarbon Fibre enokusikwa kwe-CNC Ukusika i-Carbon Fibre yeCarbon kuyindlela ekhethekileyo yokunceda abathengi bafumane isakhelo esikhethekileyo ukuvelisa i-drones yabo kwimarike. Senze intsebenziswano ezininzi kunye ne-brand eyaziwayo kwaye sifumana ngakumbi kunye nengxelo elungileyo....
Ingcaciso yeMveliso I-CNC Machining I-Aluminium Ikhampasi yekhamera Hobbycarbon i lokuvelisa professional ukuba ezizodwa Aluminium ngomshini Iintetho , icarbon ifayibha CNC Cutting Service nelogo Ukuprinta malunga neminyaka ngamava elishumi. IiNxalenye zeAluminiyam ze-CNC yinkqubo yokuvelisa eyenziwa ngokuntywila...
Ingcaciso yeMveliso I-Vertical aluminium ye-aluminium ye-clamp ye-aluminium emiselweyo Hobbycarbon i lokuvelisa professional ukuba ezizodwa Aluminium ngomshini Iintetho , icarbon ifayibha CNC Cutting Service nelogo Ukuprinta malunga neminyaka ngamava elishumi. IiNxalenye zeAluminiyam ze-CNC yinkqubo yokuvelisa...
Ingcaciso yeMveliso I-Phillips yentsimbi engenasiseko Izikhonkwane zensimbi ezingenasiseko ziyimfuneko ebalulekileyo yemihla ngemihla ejikeleze thina. Ndiyakholelwa ukuba ucinga njalo. Izikhuselo zeNtsimbi engenamandla . Kodwa umbala wabo awunanombala njengee- Aluminium Screws .Senziwe ngathi zinikezelwe imibala...
Ingcaciso yeMveliso I-Hex Socke Screws yentsimbi engenazintsimbi Izikhonkwane zensimbi ezingenasiseko ziyimfuneko ebalulekileyo yemihla ngemihla ejikeleze thina. Ndiyakholelwa ukuba ucinga njalo. Izikhuselo zeNtsimbi engenamandla . Kodwa umbala wabo awunanombala njengee- Aluminium Screws .Senziwe ngathi zinikezelwe...
Ingcaciso yeMveliso I-M3 anodized ejikeleze i-aluminium ekumeleni iHelikopta Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Okokuqala, ikholamu ye-rivet nati iyahlulahlulwe ibe ngumtya we-hole...
Ingcaciso yeMveliso I-Multicolor Anodised I-hex Aluminium Standoffs Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Okokuqala, ikholamu ye-rivet nati iyahlulahlulwe ibe ngumtya we-hole nati...
Ingcaciso yeMveliso Ukuphakama okuphezulu kweAluminiyam Anodizing ii-Knoffled Standoffs Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Okokuqala, ikholamu ye-rivet nati iyahlulahlulwe ibe...
Inqanaba Aluminium Anodised Hex Standoff Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Okokuqala, ikholamu ye-rivet nati iyahlulahlulwe ibe ngumtya we-hole nati kunye nekholam ye-nut yembobo...
Packaging: I-Carton / Njengoko ufuna
Min. Myalelo: 2 Carton
Intshayelelo yeMveliso Ubunzima beCarbon Fibre ye-Tube kunye ne-Twill Plain Uluhlu lwefayibha yekhabhoni lusekwe kwimodyuli emdaka yefungi. Imodemus enesisindo ingachazwa njengomyinge wenani lamandla okudonsa akhutshwe kwinto ngaphambi kokuqhekezwa. Iyunithi esetyenziselwa ukulinganisa imodemus yentsimbi yento yi-psi...
Min. Myalelo: 2 Bag/Bags
Intshayelelo yeMveliso I-ODM kunye ne-OEM 3K Carbon Fiber Square Tube Uluhlu lwefayibha yekhabhoni lusekwe kwimodyuli emdaka yefungi. Imodemus enesisindo ingachazwa njengomyinge wenani lamandla okudonsa akhutshwe kwinto ngaphambi kokuqhekezwa. Iyunithi esetyenziselwa ukulinganisa imodemus yentsimbi yento yi-psi...
Ingcaciso yeMveliso Intshukumo yesiko eligoqileyo le-anodized aluminium standoff spacer Intshayelelo yeMveliso I-Aluminium Standoff ithathwa ngokubanzi njengohlobo olunye Izixhobo zokugcina ukutya zeAluminiyam . Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Ikholam ye-aluminium standoff...
Ingcaciso yeMveliso Prepision isiko elineengcingo zombane ezinama-fasteners auto Intshayelelo yeMveliso I-aluminium Fasteners ibandakanya i-aluminium cage nuts flange serated. Uhlobo lwe-M2.5 Cage Aluminium Serrated Nuts yi-flange serated nut. I-M2.5 i-aluminium ye-aluminium yeeklati ngokubanzi idaliwe. Iimpawu...
Amaphepha e-Carbon Fibre Iithabhula zeCarbon Fibes Ukusikwa kweCarbon Ford CNC IiNxalenye zeAluminiyam ze-CNC Izixhobo zokugcina ukutya zeAluminiyam I-Titanium Fasteners Amaphepha e-Carbon Fibre 10mm Iphepha leCarbon Fibre
Amaphepha e-Carbon Fibre Iithabhula zeCarbon Fibes Ukusikwa kweCarbon Ford CNC IiNxalenye zeAluminiyam ze-CNC Izixhobo zokugcina ukutya zeAluminiyam